Friday June 28, 2019 - 20:40:54 in Wararka by Mogadishu Times
1-Gabar Rajo ah ( Hooyadeed dhimatay) ooTahriib aheeyd ayaa waxaa Qabsaday Magafihii Libiya. Si xun ayaa loo jir dilay, kadibna Telefon ayaa loo dhiibay si ey u wacdo Qooyskeedii. Telefonkii waxaa Qabatay Eedadeed ( Xaaskii Aabaheed) . Gabadhii ayaa
1-Gabar Rajo ah ( Hooyadeed dhimatay) ooTahriib aheeyd ayaa waxaa Qabsaday Magafihii Libiya. Si xun ayaa loo jir dilay, kadibna Telefon ayaa loo dhiibay si ey u wacdo Qooyskeedii. Telefonkii waxaa Qabatay Eedadeed ( Xaaskii Aabaheed) . Gabadhii ayaa tiri: Eedo macaan Lacag ha la ii soo diro, haddii kale kuwani waa i sii dilayaan. Eedadii ayaa ku tiri: intii aadan bixin maxaadan Alaabta iigu dhaqan oo aad u dhuumatay. ( F.S: 1aad) ( Ar Dumarka qaar naxariis badanaa !!!!!)